Semalt: Google Analytics Zvinyorwa Zvichavandudza Kuita KweSayithi Yenyu
Kune nzira dzakawanda dzekuvandudza nzvimbo yako yekushanda muGoogle Analytics, uye chikamu che kudhinda kwema digital . Kana zvasvika pakuratidza mazita akakurumbira ekufambira mberi kana kujekesa zvinokonzera kudonha kwemigwagwa, tinofanira kubhadhara kune huwandu hunhu hunoona webhusaiti yedu inogamuchira. Dhiyabhorosi yeGoogle Analytics inofanira kuva yakarurama uye inovandudza. Nenzira yakajeka, Google Analytics yakaita kuti zvive nyore kugadzirisa mafiritsi anokosha kune webhusaiti yedu - moisture of dry.
Usati wataura pamusoro pezvinhu izvi, Oliver King, Mutungamiriri weKutengi Achibudirira we Semalt , anopa kukurudzira kuti uchengetedze, mushumo unfiltered kana maonero ezita rezita rese muGoogle Analytics.
Usabvisa chitima chemukati
Haisi kushandiswa kune marudzi ose emawebsite, asi mapoka makuru makuru anokwanisa kubatsirwa nayo. Pamakambani maduku, zvinokosha kuti tisabvisa magwara mukati medu kuti tive nechokwadi chehutano hwehutaneti hwavo. Vaizofanira kuve nechokwadi chekuti nzvimbo yavo iri kugamuchira maitiro akanaka uye vanhu chaivo vari kubatana nemashizha avo ewebhu. Nokuda kweizvi, iwe unofanirwa kuisa maonero matsva ekutaurira mubhuku rako reGoogle Analytics iro rinogona kubvisa mukati memotokari zvakanyanya. Iwe unofanirwawo kuisa pamba yako IP kero kuitira kuti maonero ako uye izvi zvirege kuverengerwa kune website yako. Kana iwe uchida kusunungura nhamba yakawanda yeIndaneti, iwe unofanirwa kushandisa zvidhori zvinoshandiswa zviri nyore kugadzira uye zvine zvakawanda.
Bvisa kutumira spam
Zvaisazova zvisina kururama kutaura kuti spam yakakanganisa nhamba yakawanda yewebsite mumwedzi ichangopfuura. Ndicho chikonzero iwe unofanirwa kubhadhara kubvisa kuburitswa kwepamisi pakarepo. Iwe unofanira kubvisa mawebsite ega kana vanotarisa anotanga neDarodar, mabhatani-kwe-mawebhusayithi, uye zvakanakisisa-SEO-inopa. Pano iwe haugoni kuita chero kukanganisa; iwe unofanirwa kufungidzira zvinyorwa uye kubvisa kutumira spam uye wozoisa mazita ako munzvimbo dzakasiyana.
Ratidza zita remubati uye URL yakakwana
Nokusavapo, Google Analytics haina kuratidza zvizere URL dzemaji mumushumo wayo. Saka, kana webhusaiti yako iri www.abc.com, iwe unofanirwa kuwana mapeji akakodzera kuGoogle Analytics, uye izvi zvinogona kuitwa nekuratidzira mazita emajeri kana URL dzakakwana. Zvimwe, iwe unogona kugadzira mararamiro ehupenyu nekugadzira mafirita akasiyana siyana kune domains. Izvi hazvizokonzereki kuvhiringidzika kana iwe uine mapeji akawanda ekutarisira. Chero peji pepa subdomain inofanira kunge isina zvikanganiso isati yakatangwa.
Isolate traffic kune subdomain
Kana zvasvika pakutaurirana pamusoro pezvinotarisirwa pasi, iwe unofanirwa kuparadzanisa chitima chavo kubva kunzvimbo huru kuGoogle Analytics. Iva nechokwadi chokuti subdomains yako inoshandisa imwechete yeUA yekutevera dzimba kana zvimboti sewebsite yako huru. Iwe unogona kuita basa iri nekushanyira maonero akajeka chikamu muGoogle Analytics.
Chengetedza pasi rese URL
Pakupedzisira asi kwete zvishoma, tinoda kutaura pamusoro pekudzidzira kwezasi kwe URLs. Izvo zvakaoma kune webmasters akawanda, asi ine zvakawanda zvakawanda zvinobatsira. Iwe unogona kusanganisa ma-URL akasiyana uye unogamuchira nhamba huru yehutano hwepamusoro paAdSense yako. Zvakakosha kusimbisa deta uye kushandisa zvinyorwa zvinoshandiswa zvinogona kuderedza zvose URL yako.